Amanqaku ka-Alexandra Isenegger Martech Zone |
Amanqaku ngu UAlexandra Isenegger
UAlexandra yi CEO ye Ikhonkco. Ukuqalisa kufuna amaxwebhu asemthethweni abomeleleyo kwaye amagqwetha ahlawulisa amaxabiso aphambeneyo. I-Linkilaw izinikele ekupheliseni ukungasebenzi kakuhle, ukulungisa iinkonzo zomthetho kunye nokunceda umsebenzi wezomthetho ukuba ufikeleleke. Ngobuchwephesha bethu, izisombululo zangaphakathi endlwini kunye nendawo yentengiso esemthethweni, sibonelela ngeziqalo zangaphambi kochungechunge B ngenkxaso yezomthetho enkulu.
Ngaba uyayifuna iMiqathango nemiQathango, iMfihlo kunye neMigaqo-nkqubo yeKuki?
NgeCawa, ngo-Epreli 30, 2017 NgoMvulo, Meyi 1, 2017 UAlexandra Isenegger
Unxibelelwano kunye nokuthengiselana bekusoloko kuhamba ngesandla. Oku kuyinyani ngakumbi ngoku kunakuqala, ngokufikeleleka kwethu okuthe rhoqo kwezixhobo ezikwi-Intanethi, nokuba zikwiikhompyuter, iipilisi okanye iifowuni eziphathwayo. Njengomphumo wokufikelela kwangoko kulwazi olutsha, iwebhusayithi yenkampani iyeyona nto iphambili kumashishini ukuhambisa iimveliso zawo, iinkonzo kunye nenkcubeko kwimarike ebanzi. Iiwebhusayithi zixhobisa amashishini ngokuwavumela ukuba afikelele kwaye afikeleleke kuwo